Dayuurad ay leedahay British Airways oo daqiiqadihii ugu dambeeyey ku khasbanaatay inay ka weecato hawada dal ay dul mari jirtey + Sababta & Caddaynta | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Dayuurad ay leedahay British Airways oo daqiiqadihii ugu dambeeyey ku khasbanaatay inay...
Dayuurad ay leedahay British Airways oo daqiiqadihii ugu dambeeyey ku khasbanaatay inay ka weecato hawada dal ay dul mari jirtey + Sababta & Caddaynta
(London) 25 Maajo 2021 – Duullimaad ay samaysay British Airways ayaa u gooyey gebi ahaanba khadka hawada dalka Belarus sida ka muuqata agabka muujiya dhabbaha dayuuradda.
Dayuuraddan oo caadiyan u socotey caasimadda Pakistan ee Islamabad, ayay ahayd inay dul marto hawada Belarus.
Yeelkeede, ayaa gebi ahaanba hakisay maridda hawada dalkaasi, iyada oo maanka ku haysa wixii ku dhacay dayuuraddii Ryanair ee inta cabsi bambo lagu abuuray kaddibna lagu dejiyey Minsk si loogala dego nin mucaarad ah, sida ku cad digniin kasoo baxday Hay’adda Duullimaadyada Rayidka ah ee UK ee CAA.
Digniinta CAA ayaa weliba la sheegayaa inay soo baxday jeer ay kacday dayuuradda Boeing 777, taasoo keentay inay dul marto hawada Lithuania iyo Latvia kahor intaanay ku khasbanaanin inay Moscow ku degto si ay shidaal uga qaadato.
Previous articleArrin aan marna lagu soo qaadin Shirka Teendhada oo dhibaato badan ku haysa dalka
Next articleWhatsApp oo lagu eedeeyey inuu Israel uga hiillinayo Falastiin (Arrin uu kula kacay saxafiyiinta ku sugan Falastiin)